“महिला अधिकार नारामा मात्र होईन व्यावहारमा पनि हुनुपर्छ” SULSULE:A Truly Nepali News Portal
२०७६ फागुन २५ मा प्रकाशित
उपाध्यक्ष, रैनादेवी छहरा गाउँपालिका पाल्पा
चेतकुमारी थापा रैनादेवी छहरा गाउँपालिका पाल्पाकी उपाध्यक्ष हुन । शैक्षिक पेशाबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेकी थापा एक कुशल लोकप्रिय गायिका समेत हुन । दर्जनौं गीत संगितमा आवाज दिईसकेकी थापा २०४० सालमा पाल्पाको दोभानमा जन्मिएकी हुन । शिक्षा संकायबाट आईएड गरेकी थापाले १८ बर्षको कलिलो उमेरमै शैक्षिक पेशा अंगालेकी थिईन । दुई बर्ष निजी श्रोतमा शैक्षिक संस्थामा अध्यापन गराएकी थापाले २०६० सालमा स्थायी शिक्षकको अध्यापन अनुमति पत्र (लाईसेन्स) पाएसँगै प्राविको दरबन्दीमा निमावि सम्म अध्यापन गराएकी थिईन । २०७४ सालको स्थानिय तहको निर्वाचनमा भाग लिन शैक्षिक पेशाबाट अवकास लिई राजनीतिमा प्रवेश गरेकी थापा राजनीतिक आधारमा भन्दा लोकप्रियताको आधारमा नेपाली काँग्रेसको टिकट पाउन सफल भएकी थिईन । गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा निर्वाचित भई जनप्रतिनिधीको रुपमा काम गर्ने अवसर पाएकी थापा महिलाहरुको हकहितको विषयमा अक्सर आवाज उठाउने गर्दछिन । महिला अधिकारको सवालमा शब्द एकातिर र व्यवाहारिक पक्ष अर्कोतिर रहने गरेको बताउने रैनादेवी छहरा गाउँपालिका पाल्पाकी उपाध्यक्ष चेत कुमारी थापा सँग जनमञ्च साप्ताहिकका लागि पोसकान्त पोखरेलले गरेको कुराकानीको संक्षिप्त अंश ः
पेशा नै परिवर्तन गरेर राजनीतिमा आउनु भयो यसको कारण के होला ?
आफ्नो लगनशिल कार्य र चाहनाले त मान्छेलाई सफल बनाउँछ नै त्यसमा अरुको पनि चाहना र भावना समेटियो भने त्यसले जिवनलाई फरक क्षेत्रमा पनि सफल बनाउने हैसियत राख्दछ । बुवाको म प्रतिको सानैदेखिको शिक्षक बनाउने चाहनालाई उच्च सम्मान गर्दै शिक्षकको रुपमा १६ बर्ष सम्म कार्यरत रहेभने बुवा आमा लगायत स्थानिय आमाबुवा दाजुभाई दिदीबहिनीहरुले म जनप्रतिनिधी भएर काम गरेको देख्न चाहेको हुँदा उहाँहरुकै चाहना अनुसार राजनीतिमा प्रवेश गरे । पारिवारिक पृष्ठभूमि र म बाट समाजमा सुरु देखि नै भएको सकारात्मक सन्देश प्रवाहले राजनीतिमा स्थापित गराउने आधार सृजना गरेको हो । सिङ्गो गाउँपालिकामा पार्टीले मलाई योग्य, सक्षम, ईमान्दार देखेर उपाध्यक्षको निर्वाचनमा समावेश गराउनु र स्थानियले मतदान गरेर निर्वाचित गराउनु मेरा लागि सबै भन्दा खुशीको कुरा हो । पहिले त राजनीतिमा लाग्छु भन्ने केही सोच नै थिएन । तर अहिले लागिसकेपछि जनताको बीचमा रहेर जनताका कामहरु गर्ने निधो गरेकी छु । स्थानियहरुमा पनि म जनप्रतिनिधी भएर काम गर्दा रौनक देखिएको छ । उहाँको रौनकलाई यथावत राख्न उहाँहरुलाई परेका पीरमर्काहरुमा मल्हम लगाउनको लागि राजनीतिमा थप सक्रिय हुनुपर्ने आवश्यकता देखेकी छु ।
शैक्षिक पेशाबाट त पूर्ण रुपमा अवकास लिनु भयो अब सांगितिक क्षेत्रप्रतिको सोच कस्तो छ ?
राजनीतिमा आएपछि सांगितिक पेशा केही ओझेलमा परेको छ । पहिला जस्तो सक्रिय हुन सकेको अवस्था छैन । निर्वाचित जनप्रतिनिधी भएपछिको पहिलो जिम्मेवारी जनसेवा भएकोले त्यसबाट बचेको समय नै सांगितिक क्षेत्रका लागि उपयोग गर्ने गर्दछु । मनोरञ्जनात्मक तरिकाले सामाजिक रुपान्तरणमा गीत संगितको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुने हुँदा बचेको समयलाई सदुपयोग गरेर समाजमा सकारात्मक सन्देशको प्रवाह गर्ने गीत गाउनु राम्रो पक्ष हो जस्तो लाग्छ । अहिले बर्षमा एक दुईवटा विकृति र विंसंगति न्यूनिकरण गर्ने प्रकृतिका गीतहरु गाउँदै आएकी छु । जुन निरन्तर नै रहन्छ ।
स्टेज कार्यक्रमहरुमा कत्तिको उपस्थिती जनाउनु हुन्छ ?
पहिला जस्तो छैन् । ठुला–ठुला राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सांगितिक कार्यक्रम मेला महोत्सव बाहेक अन्य सानातिना कार्यक्रमहरु ओझेलमा परेका छन् । कतिपय अवस्थामा प्रमुख अतिथी भएर बसेको कार्यक्रममा कलाकार भएर गीत गाउनु सोभनीय नदेखिने हुँदा सानातिना कार्यक्रममा कार्यक्रम सम्पन्न पछि गीत गाएर कला प्रस्तुत गर्ने गरेकी छु । निश्चयपनि पहिला जस्तो छैन नै ।
प्रमुख अतिथी भएर कार्यक्रमको आतिथ्यता गरिरहेको समयमा गीत गाउन असहज भएजस्तो हुँदैन ?
हुँदैन । वास्तवमा कला र गला अथवा आफू सँग भएको क्षमता लुकाउनु भनेको आफूले आफैलाई गरेको अपराध हो । क्षमता छ, कला छ, देखाउन के अप्ठ्यारो मान्नु प-यो र ! बरु त्यही कलालाई सामाजिक क्षेत्रको विकास सँग जोडेर प्रस्तुत गरियो भने त्यसले झन प्रभावकारीता निभाउँछ ।
न्याययिक समीतिको संयोजक अर्थात गाउँपालिकाको न्यायधिसको रुपमा रहने उपाध्यक्ष पदमा रहेर कार्यसम्पादन गर्न चुनौतीहरु आउँछन् ?
खासै त्यस्ता चुनौतीहरु त आएका छैनन् । तरपनि न्याय दिलाउनु भनेको आफैमा चुनौतीपूर्ण कुरा हो । प्रत्येक वडा कार्यालयहरुमा मेलमिलाप केन्द्रहरु छन् । ति केन्द्रहरुले मिलाउन नसकेको अवस्थामा मात्र गाउँपालिकामा आउँदछन् । सबैपक्षहरुलाई समावेश गरेर मसिनो भन्दा मसिनो कुराहरुलाई केलाएर निष्पक्ष रुपमा काम गरिने हुँदा अदालत जानुपर्ने केशहरु बाहेक सबै गाउँपालिकामै मिल्ने गरेका छन् ।
धेरैजसो विवादहरु कुन क्षेत्रका आउँछन् ?
घरेलु हिंसाका विवादहरु धेरै हुन्छन् । चेतनाको कमीको कारणले हुने घरेलु हिंसाहरुलाई न्यूनिकरण गर्न गाउँपालिकाले विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरु पनि गर्दै आएको छ । पछिल्लो समयमा घरेलु हिंसाको दर घट्दै गएको छ । नागरिकहरु सचेत बन्दै जानु र स्थानिय सरकारले चेतनाको बृद्धि गर्नु पनि हिंसात्मक गतिविधीको अन्त्य गर्ने प्रमुख आधार हो ।
हालसम्म गाउँपालिकामा दर्ता भएका मुद्दाहरुको संख्यात्मक र फस्र्योट अवस्था कस्तो छ ?
धेरै विवादहरु मेलमिलाप केन्द्रबाट हुने हुँदा गाउँपालिकामा जम्मा आठ वटा मुद्दाहरु दर्ता भएका छन् । दर्ता मुद्दाहरु सबै फस्र्योट भएका छन् भने ति मध्ये अधिकांस घरेलु हिंसा सम्बन्धित छन् ।
महिला नेतृत्वको गाउँपालिकाको सबैभन्दा दोश्रो ठुलो पदीय जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ, महिलाहकहीतमा गाउँपालिकाबाट के कस्ता कार्यक्रमहरु भएका छन् ?
अवश्यपनि एउटा महिलाले अर्को महिलाको समस्या बुझ्न सक्दछन् र बुझ्नु पर्दछ । देशमा महिला अधिकारहरुको संरक्षण गर्नको लागि राजनीतिमा महिलाहरुलाई दिएको अधिकार इतिहासकै कोशेढुङ्गा सावित हुनेछ । पछिल्लो समयमा महिलाहरु घरको चुल्हो चौखोभन्दा बाहिर आएर बाहिरी संसार देख्न सक्ने वातावरणको सृजना भएको छ । जिवनस्तर उस्किएको छ । स्टजमा आएर दुईचार शब्दहरु मन्थन गर्न सक्ने वातावरण बनेको छ । आत्मनिर्भर बनेर आफ्नो खुट्टामा उभिनुपर्छ भन्ने चेतनाको विकास भै व्यावहारिक पक्ष पनि सोही अनुसार परिवर्तन हुँदै गएको छ । स्थानिय सरकारबाट भएका प्रोत्साहनमूलक तथा सीपमूलक कार्यक्रमहरुले जिवनस्तर उकास्ने वातावरणको सृजना भएको छ । रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाले पनि महिला लक्षित कार्यक्रमहरु अन्र्तगत सिलाईकटाई गर्ने, बुटिक बनाउने, परालको चप्पल बनाउने, ढाका बुन्ने, चुरापोते बनाउने जस्ता सीपमूलक तालिमहरुको व्यवस्था गर्दै आएको छ । जसले महिलाहरुमा छुट्टै खालकको हिम्मत आएको हामीले महसुस गरेका छौं ।
स्थानिय सरकारले दिने धेरै तालिमहरु आदर्श र लोकप्रियताका लागि मात्र भए व्यावहारिक पक्ष कमजोर भयो भन्ने सुनिन्छ नी ?
केहीहद सम्म यहाँले भनेको कुरा सत्य छ । हामी पनि त्यो विषयमा धेरै चिन्तित छौं । हाम्रो उद्देश्य एक हुन्छ तर तालिमकर्ताले त्यसको वास्तविकता नबुझ्दा समस्या देखिएको हो । शतप्रतिशतमा त्यो समस्या नभएतापनि केहीमा त्यो समस्या देखिएकोले हामीले त्यसको समाधानको उपाय खोजिरहेका छौं । तालिम लिएपछि तालिमको उद्देश्य अनुरुप चल्नुपर्छ भनेर वारम्बार दोहो-याउँदै आएका छौं । कहिंकतै पारिवारबाट पनि उद्देश्यपुर्तीको लागि बञ्चित गरिएको छ भने कतै स्वम् तालिमकर्ताको चाहना तालिम लिएर मात्र बस्ने हुँदा शतप्रतिशत व्यावहारिक पक्ष समात्न सकेको अवस्था देखिंदैन । कतिपय त तालिम लिईसकेपछि प्रशिक्षकको रुपमा पनि स्थापित हुन सफल हुनु भएको छ जुन हाम्रा लागि खुशीको कुरा हो । उत्पादनको बजारीकरणको जिम्मा गाउँपालिकाले गर्दछ, तपाईहरु उत्पादन बढाउने तर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ भन्दै आएका छौं । पछिल्लो समयमा महिला उद्यमीको संख्या बृद्धि हुँदै गएको छ । आश गरौं अबको दुई÷चार बर्षमा गाउँपालिकाका महिला दिदीबहिनीहरु आफ्नो खुट्टामा आफै उभिन सक्ने हुनुहुन्छ । गाउँपालिकाको लक्ष्य पनि त्यही हुँदा लक्ष्य प्राप्तीको लागि परिश्रम त गर्नु नै पर्छ । परिश्रम गरिसकेपछि नहुने भन्ने हुँदैन । ढिलो चाँडो अवश्य हुन्छ ।
अन्त्यमा, महिला अधिकार सम्बन्धी राज्यको नीतिमा यहाँका धारणाहरु के–कस्ता छन् ?
पछिल्लो समयमा महिला अधिकार सम्बन्धी राज्यको नीति एकदमै राम्रो छ । तर नीतिको त विकास भयो व्यावहारिक पक्षको विकास हुन नसक्दा समस्या देखिएको हो । भन्दा ५० प्रतिशत अधिकार भन्ने तर दिंदा १०÷१५ प्रतिशत पनि नदिने परम्परागत सोच नै दुभाग्र्य हो । हो, विभिन्न क्षेत्रहरुमा महिलाहरुको उपस्थिती बढ्दै गएको छ । तर जुन रुपमा बढ्नु पर्ने हो त्यो रुपमा बढ्न सकेको छैन । महिलाहरुलाई जिम्मेवारी नदिएर सक्दैनन् भनेर पन्छ्याउनु भन्दा जिम्मेवारी दिएर सक्छन् कि सक्दैनन् भनेर हेर्नु पर्दछ । त्यसैले नारामा मात्र सीमित हाम्रो देशको महिला अधिकारलाई व्यावहारमै उतार्न सकेको अवस्थामा मात्र समृद्ध नेपाल बन्न सक्छ । जनमञ्च साप्ताहिकबाट